एप्पलले सार्वजनिक गर्याे सबैभन्दा सस्तो आईफोन, नेपालमा कति पर्ला यसकाे मुल्य ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
एप्पलले सार्वजनिक गर्याे सबैभन्दा सस्तो आईफोन, नेपालमा कति पर्ला यसकाे मुल्य ?
अर्थसंसार, काठमाडाैं- बुधबार लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाे आईफोन एसई सार्वजनिक भएको छ । काेभिड १९ का कारण पटक-पटक सार्वजनिक मिति परिवर्तन हुँदै आएतापनि आईफोन एसई बुधबार कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हो ।
कम्पनीको सबैभन्दा सस्तो फोन रहेकाे आईफोन एसई प्रिमियम फोन मात्रै उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले मिड रेञ्जमा आफ्नो उपस्थिती जनाउन यो फोन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । यो फोनको सुरुवाती मुल्य तीन सय ९९ डलर अर्थात ४८ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
फोन सेतो, कालो र रातो गरि तीन फरक कलरमा उपलब्ध छ । फोन ६४, १२८ र २५६ जीबी भेरियन्टमा उपलब्ध फोन कम्पनीले विषेशगरी भारतीय बजारलाई लक्षित गर्दै ल्याएको हो । मोबाइलको दोस्रो ठूलो बजारको रुपमा उदाएको भारतलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कम्पनीले पछिल्लो समय स्मार्टफोन निर्माण गर्न थालेका छन् ।
यो फोन काेराेनाका कारण केही ढिला भएतापनि चाँडै नेपाली बजारमा पनि आउने निस्चित छ । यसको मुल्य नेपाली बजारमा निस्चित भैसकेको नभएतापनि ५० हजार भन्दा कम मूल्यमा नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन सक्ने अनुमान गरिएकाे छ।